ရန်ကုန်တွင် ရှမ်းတိုင်းရင်းသား အဖွဲ့များ၏ ပထမဆုံးညီလာခံ ကျင်းပမည် | ဧရာဝတီ
ရန်ကုန်တွင် ရှမ်းတိုင်းရင်းသား အဖွဲ့များ၏ ပထမဆုံးညီလာခံ ကျင်းပမည်
နန်းဆိုင်နွမ်| November 7, 2012 | Hits:2,079
0 | | ရှမ်းပြည်တပ်မတော် မြောက်ပိုင်း (SSA / SSPP) နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း ကော်မတီတို့ လားရှိုးမြို့ ရွှေလီခန်းမတွင် တွေ့ဆုံနေစဉ်၊ SSA / SSPP လည်း ညီလာခံ တက်ရောက်မည် ဖြစ်သည် (ဓာတ်ပုံ – ဦးလှမောင်ရွှေ / Facebook)
အစိုးရအဖွဲ့များအတွင်းရှိ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများနှင့် အစိုးရနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် ရှမ်းလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များအကြား ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်နိုင်ရန်အတွက် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ၏ ပထမဆုံးညီလာခံကို နိုဝင်ဘာလကုန်တွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာတွင် ကျင်းပသွားမည်ဟု သိရသည်။
အဆိုပါ ညီလာခံတွင် အစိုးရနှင့် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများအကြား ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ရေး၊ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး ရှုထောင့်အမြင်နှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူထုအခြေပြု အဖွဲ့များ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရာတွင် ပါဝင်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများ စသည်တို့ကို အဓိကထား ဆွေးနွေးသွားမည်ဟု ရှမ်းအမျိုးသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (SNLD) ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခွန်ထွန်းဦးက ဧရာဝတီသို့ပြောသည်။
“ညီလာခံကို အယောက် ၁၂၀ လောက်တော့ ခန့်မှန်းထားတယ်။ အစိုးရနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူ လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ အဖွဲ့တွေက လူတွေကိုလည်း ဖိတ်ထားတယ်။ ရှမ်းပြည်နယ် တပြည်လုံးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေ အဖြေထွက်မယ်။ ပြီးတော့ ရှမ်းပြည်နယ် လူထု သဘောဆန္ဒတွေ ထွက်လာမယ်လို့တော့ မျှော်လင့်ပါတယ်” ဟု ဦးခွန်ထွန်းဦးက ဆိုသည်။
ထို ညီလာခံတွင် ဒုတိယ သမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်း၊ သမ္မတရုံးဝန်ကြီးများ ဖြစ်သည့် ဦးအောင်မင်း၊ ဦးစိုးသိန်း၊ အစိုးရနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောတူညီထားသည့် ရှမ်းလက်နက်ကိုင် ၄ ဖွဲ့၊ ရှမ်းနိုင်ငံရေးပါတီ ၃ ခု၊ ရှမ်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီ၊ ရှမ်းလူမှုအဖွဲ့အစည်း စုစုပေါင်း ၁၂ ဖွဲ့နှင့် ပြည်ပ ပညာရှင်များကိုပါ ဖိတ်ကြားထားကြောင်း ၎င်းက ထပ်လောင်းပြောသည်။
ရှမ်းလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း ၄ ဖွဲ့တွင် ရှမ်းပြည်တပ်မတော် မြောက်ပိုင်း (SSA/ SSPP)၊ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် တောင်ပိုင်း (SSA/ RCSS)၊ မိုင်းလား (NDAA – ESS) နှင့် စိန်ကျော့ပြည်သူ့စစ် အဖွဲ့များ ပါဝင်ပြီး နိုင်ငံရေးပါတီ ၃ ခုတွင် SNLD၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (SNDP) နှင့် တိုင်းလိုင် (ရှမ်းနီ) အမျိုးသားများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ (TNDP) တို့ ပါဝင်မည် ဟုလည်း သိရသည်။
အဆိုပါ ရှမ်းညီလာခံနှင့်ပတ်သက်ပြီး SNDP ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုင်းအိုက်ပေါင်းက “ကျနော်ကတော့ အဲဒီပွဲကို တက်ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ပါတီကတော့ အဲဒီညီလာခံကို လေ့လာသူ အနေနဲ့ တက်မယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ကြတာ ဆိုတော့ကောင်း ပါတယ်” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ညီလာခံတွင် ဆွေးနွေးမည့် အကြောင်းအရာများကို ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းနှင့် မန္တလေးတိုင်း တို့ရှိ ရှမ်းတိုင်းရင်းသား အများစုနေထိုင်သည့် ဒေသများသို့ အဖွဲ့ ၄ ဖွဲ့ခွဲကာ ကွင်းဆင်း လေ့လာလျက်ရှိပြီး နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့အပြီး သဘောထား ကောက်ယူသွားမည်ဟုလည်း သိရသည်။
မူဆယ်ရှမ်း လူမှုအဖွဲ့အစည်းမှ ရှမ်းတိုင်းရင်းသား တဦးအား ဧရာဝတီ သတင်းဌာနမှ ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ “တိုင်းရင်း သားတွေအတွက် တန်းတူညီမှု အခွင့်အရေး ရဖို့၊ ရှိဖို့ လိုတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ တန်းတူညီမှုဆိုတာ ပြောနေတာပဲ ရှိတာ၊ ရှမ်းပြည်နယ် ရွာသားတွေဆိုရင် Human Right ဆိုတာ ဘာမှန်းကို မသိကြသေးဘူး။ ပြီးတော့ အခုဆိုရင် ရှမ်းပြည်နယ်မှာ မူးယစ်ဆေးဝါး အထွက်အများဆုံးဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူလည်း ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက် မြင့်တက်လာတယ်။ ဒါတွေကို အဓိက ဆွေးနွေးရင် ကောင်းပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဇူလိုင်လ အတွင်း သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ဦးခွန်ထွန်းဦးအား ခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး ရေရှည် တည်တံ့ရန်နှင့် ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင် တဦးအနေနှင့် ဝိုင်းဝန်း လုပ်ဆောင်ပေးရန် တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မင်းကလည်း မကြာမီတွင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ ရန်ကုန်သို့ လာရောက်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာတွင် တိုင်းရင်းသားများအရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး စသည်တို့ကို ဆွေးနွေးနိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်နေ့က ဒီမိုကရေစီမဟာမိတ် ၁၁ ပါတီနှင့် တွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ရှမ်းပြည်နယ်တွင် နှစ်နှစ်အတွင်း လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရမှု တိုးမြင့်
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment Sai hseng November 7, 2012 - 4:54 pm	ကျနော် သိရသလောက်တော့ ဒီဖိုရမ် ဖြစ်မြောက်ရေးမှာ ကျားဖြူက ကိုယ်စားလှယ်တွေလဲ ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီမှာ ပါဝင်တယ် မဟုတ်လားခင်ဗျ။ဒီကိစ္စအတွက် တောင်ကြီးမှာ ပထမဆုံးအစည်းအဝေး လုပ်တုန်းက ကျားဖြူက ကိုယ်စားလှယ် ၈ ယောက်တောင် တက်တယ်လို့ ကောလီ သတင်းဌာန ကတင်တဲ့ သတင်းတစ်ခုမှာ ဖတ်လိုက်ရတယ်ခင်ဗျ….အခု က ကျားဖြူက လေ့လာသူအနေနဲ့ပဲတက်မယ်ဆိုတော့ တော်တော်လေးကို လွဲနေသလားလို့ပါ…
Reply	နန်းဆိုင်နွမ် November 8, 2012 - 5:17 pm	အဲ့မှာရေးထားတာက ဦးအိုက်ပေါင်းမတက်တာလို့ပြောတာပါ။ပါတီက လူတွေကတော့ အဲ့ညီလာခံမှာ လေ့လာသူအနေနဲ့တက်မယ်လို့ပြောထားတာပါ
Reply	စိုင်းမူဆယ် November 7, 2012 - 6:09 pm	ရှမ်းလူမျိုးများအားလုံးတစ်သွေးတစ်သားနဲ့သဘောထားညီညွတ်ရေးကိုလုံးဝထောက်ခံပါတယ် ရှမ်းများအချင်းချင်းပင်မက မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရှိသောတိုင်းရင်းသားများအားလုံး စည်းလုံးညီညွတ်သောအားဖြင့်မိမိတို့ လိုချင်သောဖက်တရယ်ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို နည်းမှန်လမ်းမှန်ဖြင့် မြန်မြန်ထူထောင်နိုင်ကြပါစေ့
Reply	baby sai November 7, 2012 - 9:05 pm	ကျားဖြူကတော့ခေါင်းရှောင်နေပြီ ဒီလိုခေါင်းရှောင်မယ်ဆိုတာထင်သားဘဲ သူကနေရာကောင်းသွားပြီကို ဒီလိုလူတိုင်းပြည်ဘယ်လိုအုပ်ချုပ်မှာလဲ တိုင်လိုက်ပြီဟေ.ဆိုကျားဖြူ ဟိုစပ်စပ်ဒီစပ်စပ်ကျားဖြူ ရှမ်းအကြောင်းဘာမှမသိတဲ့မိန်းမကိုလဲလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ခိုင်း နောက်ထပ်မူဆယ်ကတယောက်ကလဲ သားကကျပ်မပြည့် ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတိုးတက်တော့မှာလဲ စီးပွားရေးအမြင်တွေလဲမရှိ ဟိုယောင်ယောင်ဒီယောင်ယောင်
Reply	Taunggyi Resident November 8, 2012 - 1:25 am	According to Khun Htun Oo, the conference will bring unity among the political parties and people in Shan State. I can’t see how is going be as he said, as the conference will only assemble the ethnic Shan political parties and its people, while there are many different ethnic groups in Shan State.
Reply	noonsifha November 20, 2012 - 12:45 am	အင်း. .. ဒါ စာတမ်းဖတ်ပွဲလို့ ကြားတယ်..ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးညှိနိုင်းတဲ့ပွဲ မဟုတ်ဘူးထင်တယ် သတင်းပဲ လွှဲနေတာလား …ကိုယ်ပဲ အိပ်ချင်မူးတူး ဖြစ်နေတာလားတော့ မသိဘူး. . .
အားလုံး အာရုံစိုက်ရမယ့်ကိစ္စက ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ အာဏာလွှဲပြောင်းနိုင်ဖို့